VOB Splitter: Olee otú SPLIT / Kpaa / Cut VOB Files
> Resource> tọghata> Olee otú iji kewaa / Kpaa / Cut VOB Files
Otú eleghị anya ị nwere nnukwu VOB faịlụ, nke eleghị anya nwere ọtụtụ dị iche iche music videos, na ị chọrọ kewaa ọ bụla song ma ọ bụ isi elu n'ime nta akụkụ. Na nke a, e nwere nnọọ ụzọ dị mfe iji nyere gị aka ime nke a ngwa ngwa: Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Nke a ọkachamara VOB splitter-enyere gị aka kewaa video n'ime mkpachị na-azọpụta onye ọ bụla clip n'ime ọhụrụ faịlụ. Ọzọ pụrụ iche ma dị ike ọrụ bụ na, a VOB faịlụ splitter-enye gị ohere mbupụ niile ọhụrụ faịlụ na oge. Nke a pụtara na ị pụrụ nweta niile na obere vidiyo na ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe. Na-agụ na Iji nweta ihe ọmụma banyere nke a VOB splitter na-amụta otú gbawaa / ịkpụ / ewepụtụ VOB faịlụ
Best VOB Splitter: Wondershare Video Ntụgharị
Mfe kewaa gị VOB videos n'ime iberibe enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.
Zọpụta niile splitted videos na oge.
Tọghata videos ndị ọzọ formats ma ọ bụ mee ka ha dakọtara na mobile ngwaọrụ.
1. Tinye VOB faịlụ ka a VOB splitter
Pịa menu ma ọ bụ see "Tinye Files" button na nke a ngwa si ​​ebi ndụ mbubata VOB faịlụ site na diski ike a VOB faịlụ splitter. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ kwekọrọ ekwekọ VOB faịlụ Ogwe e gosiri na ebi ndụ nke a usoro.
2. Split VOB n'ime mkpachị
Chetara VOB faịlụ mmanya ị chọrọ kewaa site a dị mfe ịpị, wee pịa "Dezie" button na ya, wee họrọ "ewepụtụ" site sub menu. Na popping-elu window, ị na-ahụ abụọ sliders na ma nsọtụ nke video ọganihu mmanya? OK, dị nnọọ ịdọrọ na dobe abụọ sliders ka karị setịpụrụ mmalite na-agwụcha oge, wee pịa "Scissor" akara wepụ họrọ video clip.
Mgbe ị na kewaa VOB n'ime ọtụtụ mkpachị dị ka ị chọrọ, dị nnọọ pịa "OK" zọpụta ndị a ntọala. Ozugbo ahụ, họrọ obere vidiyo ga-depụtara na ebi ndụ nke ngwa a.
3. Export VOB mkpachị
Pịa Format akara ngosi na n'akụkụ aka nri nke isi interface, na mgbe ahụ na-aga "usoro"> "Video"> "DVD-Video" (VOB). See "tọghata" mbupụ ya. Site n'enyemaka nke Video Ntụgharị, ị nwere ike inwe ihe ọ bụla nke nke gị VOB faịlụ ọsọ ọsọ na mfe. Ịtụnanya, ọ bụghị ya?
Video Tutorial: Olee otú SPLIT / Kpaa / Cut Video Files
Olee otú dezie VOB Videos na Windows na Mac
Olee ka jikota / Ikpokọta / Jikọọ VOB Video Files
Top 5 Free VOB Editors
Olee otú iji tọghata VOB ka DVD
Otú mix Video Files
Olee otú akuku Video Files
Olee otú ka Wepụ Audio si Video
Mee ka a Foto dị na Foto dị Mmetụta Mfe
Top 10 Best Free Video edezi Software maka Windows
Top 10 Best Free Video edezi Software maka Mac